Ny teo anivon’ny polisy dia nilaza fa efa mandeha ny fanadihadiana ary tsy nilaza kosa na nisy ny voasambotra na tsia na dia nisy vaovao niparitaka aza omaly fa mpianatra iray no nosamborina. Ahiana mafy ny hisian’ny valifaty izay hataon’ny mpianatry ny lisea Rabearivelo amin’ny mpianatry ny Lisea LTC. Nodimandry ny alakamisy lasa teo tany amin’ny hopitaly, Rakotomalala Sedera, raim-pianakaviana vao 27 taona monja ilay “Surveillant général” ao amin’ny Lisea Jean Joseph Rabearivelo Analakely nanasaraka ireo mpianatra nifamono sendra azy. Mpianatry ny lisea Technique Commercial Ampefiloha sy ny lisea Rabearivelo ireo nifandona ireo raha araka ny loharanom-baovao azo. Tratry ny tsy nampoizina anefa Itompokolahy ka nanjary nafoiny hatramin’ny ainy mihitsy. Ny dona mafy teo amin’ny kibony no antony tena nitarika ny fahafatesany. Namela mananon-tena sy zaza iray vao fito taona monja izy.